I-Wholesale ye-TPE Yoga Mat ene-Carrying Strap fitness mat Ye-Floor Exercises Manufacture and Factory |XGEAR
Izikebhe & Watersports
Ukukhempa & Ngaphandle
Izindawo zokukhosela zamatende
I-Circle Gym Ball
Ithenisi edlalwa etafuleni
Ibhodi eliphathekayo le-Inflatable Stand Up Paddle labadala...
I-XGEAR Pop Up Easy Faka i-6 sided Hub Screen House /...
Isihlalo Sebhakede Sabaphathi Bethoni Ababili Phenya Isihlalo Sesikebhe
I-XGEAR 2 ku-1 Foldable Camping Lounge Chair ene-Deta...
600D Ikhava Yesikebhe Engangeni Manzi I-Fit V-Hull Tr...
8-ply Professional Intambo Yempi Enzima kanye Nokweluka Rop...
Marine-Grade 600D 3 Bow Bimini Top Cover in Differen...
Nomaphi Isetha Ithenisi Yethebula Nge-Retractable Net
I-Deluxe Foldable Low Back Boat Seat
I-XGEAR Padded High Back Foldable Camping Chair ene-C...
I-Pontoon Captains Bucket Boat Seat
I-XGEAR Low Seat Lightweight Folding Beach Chair ene ...
I-XGEAR Pop Up Canopy Tent 10′x10′, Easy S...
I-Speed ​​Agility Training Setha nge-TPE Ladder ukuze uqine...
I-XGEAR Lightweight ne-Sturdy Pop Up Shower Tent Spec...
I-TPE Yoga Mat ene-Carrying Strap fitness mat ye-Flo...
I-Anti-Burst Fitness Ball ne-Yoga Ball Yokuzivocavoca, ...
600D 4 Bow Bimini Ikhava Ephezulu Ngemibala Ehlukene nge...
I-TPE Yoga Mat ene-Carrying Strap fitness mat ye-Floor Exercises
I-XGEAR umata wokujima owenziwe nge-TPE eco-friendly, engenabuthi, engenaphunga, ekwazi ukugaywa kabusha, ekwazi ukumelana nokuqina kanye nokuhuzuka okungcono, uma kuqhathaniswa nezinye izinto ezivamile ze-PVC, i-NBR noma i-EVA.
Le mat ye-yoga engasheleli enebhande lokuthwala, ayilona nje ibhande le-yoga mat, futhi iyibhande elilula lokufudumeza, futhi inomugqa wokuqondanisa olungele i-yoga, i-Pilates kanye nokuzivocavoca phansi.
Isikhathi esiholayo:IZINSUKU ezingama-35
Inkokhelo:L/C, D/A, D/P, T/T
● I-Eco-Friendly TPE Material:Umata wethu wokufaneleka owenziwe nge-TPE (Thermoplastic Elastomer) ongenabuthi, ongenaphunga futhi Ogaya kabusha, ungcono kunabanye omati be-yoga be-PVC, i-NBR noma i-EVA yendabuko.
● I-Anti-Skid & Better Grip:I-exercise mat ihlinzeka ngokudonselana okuhle kakhulu nokubamba okuphezulu ngenxa yongqimba oluphezulu olukhethekile, ingavimbela umzimba wakho ukuthi ungashiyi endaweni.Ingakwazi ukuvimba umata ukuthi ungasheleli phansi ngomklamo Wongqimba Olungezansi Lwegagasi.Ngakho-ke ungahlala ugxile lapho wenza i-Yoga, Ukuzindla, Ukwelula, Ama-Pilates kanye Nokuzivocavoca Kwaphansi.
● I-Cushioning engcono:Izici zale premium TPE yoga mat ukuminyana okuphezulu nokuqina, ngakho-ke umata wokujima ungcono kakhulu.Ilungele ukudambisa izinhlungu endaweni ebucayi njengamalunga, amadolo, izindololwane, izihlakala, ingalo yangaphambili.
● Impilo Yesevisi Engasindi Nende:Izilinganiso zethu ze-yoga mat eziyi-1/4'' eziwugqinsi: 72”X 24” X1/4” zinesisindo esingama-ounces angu-30.Ibhande lesitayela likwenza kuthwaleke ukuthwala.Akukho ukukhathazeka ngokuwa noma ukuwa ngenxa yempahla yayo ehlala isikhathi eside.
Inombolo yento 202373
Okubalulekile I-Thermoplastic Elastomer
Isici Ukuvikela amanzi, ukumelana nokushibilika, ukuminyana okuphezulu nokuqina
Ukunakekelwa Komkhiqizo Insipho yokugeza izandla kuphela
Ubukhulu (usayizi webhokisi langaphakathi) L24" x W5" x H5"
Usayizi webhokisi L24.8" x W15.75" x H20.47" (12pcs/box)
● I-yoga mat ayikwazi ukumelana nomswakama.Kungaba lula ukusula phansi futhi kuhlanzwe ngensipho namanzi.Sicela uyigcine inomoya omuhle ngemva kokuyisebenzisa.
● Iza Nebhande Elisetshenziswa Kabili: Hhayi nje ibhande le-yoga mat, futhi ibhande elilula lokuzifudumeza.
Kuyimishini yokuzivocavoca enhle ekhaya ye-Yoga, Ukuzindla, Ukwelula, I-Pilates kanye Nokuzivocavoca Kwaphansi
Okwedlule: Isihlalo Sompheme Esigoqekayo Esigoqekayo esinohlaka lwe-Aluminium nama-Armrests
Olandelayo: I-XGEAR I-Lightweight ne-Sturdy Pop Up Shower Tent Special Room Lokukhempa, Ukuqwala izintaba ngosayizi Omkhulu
8-ply Professional Intambo Yempi Enzima kanye ne-Weavin...
I-Speed ​​Agility Training Isethwe nge-TPE Ladder ye ...
I-Anti-Burst Fitness Ball ne-Yoga Ball Yokuzivocavoca...
Ungayiphumuza Kanjani Imisipha Yakho Ngemva Kokuzivocavoca Okunamandla Amandla?
Kungani kufanele ufudumale ngaphambi kokuzivocavoca?
Yini Ezuzisa I-Carver Bimini Top Letha?
Umhlahlandlela olula wokudoba ovela esikebheni
© Copyright 20102022 : Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Eshisayo Imephu yesayithi IAMP Mobile